Ivotoerana valiny |
Ny ankamaroan'ireo ivon-toerana famolavolana axis dimy dia mandray rafitra 3 + 2, izany hoe, XYZ famaky mihetsika telo miampy roa amin'ireo famaky telo an'ny ABC mihodina manodidina ny axis XYZ. Amin'ny lafiny lehibe dia misy ny kyzab, xyzac ary xyzbc. Raha ny endriny mitambatra amin'ireo famaky roa mihodina dia mety div ...
Ny loharanom-pahalalana mpamatsy kalitao avo indrindra amin'ny indostrian'ny fanodinana mekanika dia mifantoka amin'ny faritry ny renirano Pearl Delta sy ny Yangtze River Delta, izay vondron'ireo mpanamboatra lathe CNC dia vondrona iray tena lehibe koa. Ka ahoana ny fomba fisafidianana marina ny CNC lathe processing ...
Inona ny hoavin'ny specialty NC machining ary ahoana ny fomba hisafidianana?
Any Chine, ny fahaizan'ny milina cnc dia nanjary universal tamin'ny folo taona lasa, ary ny mpamokatra milina cnc dia mivelatra amin'ny toerana rehetra. Ny tokonam-baravaran'ny orinasam-pivarotana NC dia miha ambany sy ambany ary ny fampiasana teknolojia ny fahaizan'ny milina NC dia be mpampiasa kokoa. ...
Fanaraha-maso ny mari-pahaizana momba ny milina amin'ny lathe CNC amin'ny famokarana
Ny fifehezana ny fahamendrehan'ny milina CNC lathe amin'ny famokarana Ny fiantraikan'ny fahamendrehan'ny lathe CNC dia matetika noho ireto antony maromaro ireto, ny iray no antony ara-pitaovana, ny faharoa dia ny olana amin'ny fitaovana, ny fahatelo dia ny programa, ny fahefatra dia ny hadisoana amin'ny benchmark, anio Wally machin ...
Ahoana ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny programa fikirakirana machining CNC
Ao amin'ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC, ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana machining centre dia fepetra takiana ho an'ireo mpampiasa milina. Ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny milina CNC dia misy ny olana ara-pitaovana, ny olana eo amin'ny sehatry ny milina, ny masontsivana sns ..., ary ireo antony ireo ...
Indostrian'ny fanodinana CNC aorian'ny taona 2019, mihamaro ny orinasa mahatsapa ny fihenan'ny baikon'ny tsena. Ny fomba fitantanana ny indostrian'ny fanodinana CNC dia nanjary lohahevitra iray nampanahy an'ireo mpandraharaha maro. Ny teknolojia milina Wally dia niasa tao amin'ny indostrian'ny fanodinana CNC nandritra ny taona maro, ary als ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny fisian'ny fifandonana amin'ny famokarana isan'andro ny machining CNC amin'ny lathe
Amin'ny dingan'ny fikirakirana mekanika isan'andro, ny fanodinana ivon-toeran'ny milina CNC no dingana mahazatra indrindra, ary koa ny fizotran'ny fikirakirana mazava indrindra. Rehefa mankafy ny fitaovana teknolojia avo lenta hamahana ny olan'ny fikirakirana izahay, ahoana ny fomba hisorohana ny ivon-toeran'ny milina CNC tsy hamely ny m ...
Ahoana ny fisafidianana ireo masontsivana famahanana marina ho an'ny lathe CNC amin'ny fizotran'ny faritra mba hiantohana ny fahamarinan'ny vokatra
Amin'ny dingan'ny fanodinana faritra mekanika, ny lathe CNC no fitaovana fanodinana CNC mahazatra indrindra. Ahoana ny fomba hiantohana tsara ny fahamarinan'ny fanodinana vokatra? Ny fametrahana ny masontsivana famahanana fanapahana ny lathe CNC no fomba marina hiantohana ny fahamarinan'ireo vokatra. Avy eo Wally machin ...
Ahoana ny fanombanana ny maha-marina ny teny nalaina tamin'ny foiben'ny machining CNC rehefa mividy ampahany marina
Rehefa mividy ampahany marina ny orinasa dia tsy azo hamarinina amin'ny fomba marina ny teny nalaina tamin'ny ivon-toeran'ny milina CNC nomen'ny mpamatsy, izay mitarika ny fifidianan'ireo mpamatsy, ka miteraka tsy fahombiazan'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fanemorana ny fandefasana. Ahoana no tokony hanombatombantsika tsara ny teny nalaina tamin'ny machin CNC ...
Ny fahamarinan'ny ivon-toeran'ny milina amin'ny ankapobeny dia tsaraina amin'ny lafiny iza avy
Mirotsaka amin'ny indostrian'ny fanodinana mekanika, ilaina ny fitaovana fanodinana CNC, antsoina matetika hoe foibe fanodinana, antsoina koa hoe gong solosaina. Na ny ivon-toeran'ny milina dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny vokatra fanodinana, ny voalohany dia ny maha-marina ny foiben'ilay milina ...
Topimaso momba ny fahamendrehana milina CNC amin'ny milina
Amin'ny fametahana isan'andro, ny fahamendrehan'ny milina CNC izay matetika resahina dia misy lafiny roa. Ny lafiny voalohany dia ny refin'ny refin'ny fanodinana, ary ny lafiny faharoa dia ny fahamendrehan'ny fanodinana, izay koa ny fahamendrehan'ny faritra lazaintsika matetika. Andao hofaritana fohifohy ny ...
Amin'ny milina, aiza ny tombony amin'ny haitao fanoratana vy
Ny milina dia mizara amina machining mazava ho an'ny CNC, fanodinana lathe CNC, fametahana stamping sns. Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fizotranay amin'ny metaly iraisana sy ny fanodinana mekanika hafa, ary inona avy ireo tombony? Ny tsy fitovizan'ny fizotry ny fanidiana vy amin'ny alàlan'ny cnc ...